Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Saint Kitts iyo Nevis Breaking News » 75% dadka St Kitts iyo Nevis ayaa bartilmaameedsaday dadka la tallaalay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Maadaama ay tahay jasiirad laba geesood ah oo fog oo ku taal gobolka Kariibiyaanka, St Kitts iyo Nevis waxay ku tallaabsadeen horumar sannado badan si ay u dhisaan dhaqaale iskiis u taagan. Dakhliga dalka intiisa badan wuxuu ku xiran yahay dalxiiska.
Dawladda St Kitts iyo Nevis ayaa ku bixisa lacag ka badan $ 18 milyan si loola dagaallamo masiibada COVID-19.
Saddex meelood oo meel dadka bartilmaameedka ah ee St Kitts iyo Nevis ayaa lagu tallaalay qiyaasta koowaad ee tallaalka COVID-19.
Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu kaloo u mahadceliyey St Kitts iyo Nevis oo wada -hawlgalayaasha laba geesoodka ah sida wanaagsan ee ay u bixiyeen tallaallada.
St Kitts iyo Nevis waxay ku bixiyeen EC $ 18 milyan fulinta tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19, ayuu yiri Raiisel wasaare Timothy Harris intii lagu gudajiray shir jaraa'id. Wuxuu intaas ku daray in lacagahaas loo adeegsanayey in lagu galo gawaarida, waaxyada, xarumaha karantiilinta iyo gargaarka baaritaanka. Warka ayaa imanaya iyadoo Ra'iisul Wasaaruhu ku dhawaaqay tallaalka-koowaad oo ah in ka badan 75 boqolkiiba dadka loogu talagalay Xiriirka toddobaadkii hore.
St Kitts iyo Ra'iisul Wasaaraha Nevis Timothy Harris
Sida uu sheegay Ra'iisul Wasaare Harris, shan milyan oo doollar oo dheeraad ah oo ku saabsan hindisahan caafimaad ayaa la bixin doonaa dhammaadka sannadka. Tani waxay wadarta guud ee kharashaadka la xiriira COVID-19 gaarsiin doontaa in ka badan EC $ 23 milyan.
Intii lagu gudajiray khudbaddiisii ​​tooska ahayd ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, wuxuu muujiyey baahida loo qabo in la sii wado maalgashiga nidaam caafimaad oo adkaysi leh. “Waxaan si adag u aaminsanahay in qofna uusan nabad qabin ilaa qof walba uu badbaado. Taasi waxay u baahan tahay in si siman loo helo tallaallada iyo alaabooyinka kale ee caafimaadka, ”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaruhu. “Waxaan qaadnay tallaabo aan siineyno dadka u baahan barnaamijyada badbaadinta bulshada. Runtii, waxaan hirgelinnay EC $ 120 milyan xirmo kicinta COVID-19. Waxaan hoos u dhignay canshuurta dakhliga shirkadaha si loo -shaqeeyayaashu u haystaan ​​75% xoogsatada waxaanna soo bandhignay canshuuraha iyo ka -dhaafitaanka waajibaadka alaabada la xiriirta masiibada. ”
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale u mahadceliyay St Kitts iyo NevisWada -hawlgalayaasha laba geesoodka ah ee deeqsinimadooda ku aaddan bixinta tallaallada. Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Qaranka Mark Brantley, oo New York u joogay UNGA, ayaa uga mahadceliyay Raiisul Wasaaraha India Narendra Modi fududeynta waqtiga habboon ee tallaallada COVID-19, oo uu sheegay inay u saamaxday inuu ka qeybgalo munaasabadda.
Iyada oo ah jasiirad laba-fog fog ah oo ku taal gobolka Kariibiyaanka, St Kitts iyo Nevis ayaa ku talaabsatay sanado badan sidii loo dhisi lahaa dhaqaale iskii u taagan. Dakhliga dalka intiisa badan wuxuu ku xiran yahay dalxiiska. Xiritaankii iyo joojinta warshadii dalxiiska ka dib, lacagihii lagu fulin lahaa Barnaamijka Ka-hortagga Saboolnimada (PAP)-qorshe ujeedadiisu tahay in la siiyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo gunno bil kasta ah $ 500-ayaa la soo saaray Barnaamijka Jinsiyadda ee Maalgashiga (CBI).
Iyada oo loo marayo CBI, maalgashadayaasha ajnabiga ah ee sumcadda leh ee ka gudba dadaalka habboon ayaa lagu soo dhaweynayaa si ay u helaan St Kitts iyo Nevis 'muwaadinimo qiimo leh oo lagu beddelo tabarruc dhaqaale. Xulashada sanduuqa ayaa bixisa dariiqa ugu waxtarka badan ee loo maro dhalashada labaad.
Maalgashadayaashu waxay soo jiitaan St Kitts iyo Nevis maxaa yeelay waa nabadgelyo, dimuqraadiyad casri ah. Waa labadaba qoyska iyo maalgashade-saaxiibtinimo, halkaas oo muwaadiniintu si fudud u heli karaan dhaqdhaqaaq caalami ah oo dheeri ah, kala duwanaan karaan hantidooda oo ay yeelan karaan Qorshaha B.